sport – FBV SPORT NEWS
သရဲနီစိတ်ပျောက်နေတဲ့ ဂိတ်မှူးတွေရဲ့ ရွံရှာဖွယ်ခြေစွမ်းနဲ့ဖာဂီကြီးပါ ကွင်းထဲခေါ် အရှက်ခွဲသွားတဲ့ ဖိုင်နယ်ပြုတ်ဆိုလ်းရှား အုနိုင်းကဘုတိုင်းမကစာသွားးပေမယ့် ရွံရှာဖွယ်ခြေစွမ်းနဲ့ခွက်ပျောက်သွားပြန်ရတဲ့ ယူနိုက်တက်တော့ဖြစ်ခဲ့ရပြနိပါပြီ မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ယူနိုက်တက်တို့နဲ့ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ယူရို့လိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကတော့ ရိုးရာမပျက်ကမ်းဘတ်ကြီးလည်းမကယ်နိင်တော့ပဲ အချိန်ပိုမိနစ်၃၀ထိကန်တာသရေကျနေလို့ ပယ်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ယူဆိုက်တက်တို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ် ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲဖလားကြီးကို ယူဆိုက်တက်တို့ သိမ်းပိုက်ရလေမလားဆိုပြီး …
ဆာအဲလက်ကဘောလုံးစွယ်စုံကြမ်းမို့ ညဏ်စမ်းမေးခွန်းမေးခဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဆိုလ်းရှား မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဗီလာရီးရဲလ်တို့ကန်မယ့်ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို လိုက်ပါခဲ့တဲ့ ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ဟာဘောလုံးစွယ်စုံကြမ်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆိုလ်းရှားကညဏ်စမ်းတစ်ခု မေးခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာပါတယ် ဒါပေမယ့်ဆာအဲလက်ဟာ သူ့ထက်အရင် ဆိုလ်းရှားမေးတဲ့မေးခွန်းကို ကစားသမားတစ်ယောက်က ဖြေခဲ့လို့ စိတ်မပျော်ဘူးလို့ဆိုလ်းရှားကခုလိုဆိုပါတယ်။ သူဟာ ဘောလုံးစွယ်စုံကြမ်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ မနေ့က ကျွန်တော်ညဏ်စမ်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်။ …
ဆီဗီလားတိုက်စစ်မှူူးကိုလီပါပူူလ်းနဲ့အပြိုင်လုနေတဲ့မန်ယူ မန်ယူအသင်းဟာလာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အင်အားကိုဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ယခုအချိန်ထဲကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီး အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ်ဆီဗီလားအသင်းရဲ့မော်ရကိုလက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးယူဆွတ်အယ်နာစရီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အယ်နာစရီကို မန်ယူအသင်းနဲ့အပြိုင်ခေါ်ယူူနိုင်ဖို့အခြားပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လီပါပူလ်းအသင်းကလည်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အခြေနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ မန်ယူအသင်းမှ အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကာဗာနီဟာ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာ အသင်းကနေထွက်ခွါတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်မန်ယူအသင်းဟာတိုက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းမှုကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရတော့မှာပါ။ မန်ယူအသင်းဟာ ကာဗာနီထွက်ခွါနိုင်မှုကြောင့် အထောင်တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့အယ်နာစရီက အရေးကြီးပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါဆီဗီးလားအသင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကမှ‌ရောက်ရှိလာပေမယ်‌့အထူးခြေစွမ်းပြနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အယ်နာစရီဟာဆီးဗီးလားအသင်းမှာလာလီဂါ၃၁ပွဲကစားထားပြီး၁၆ဂိုးသွင်းယူထားသလိုချန်ပီယံလိဂ်၈ ပွဲကစားခွင့်ရရှိထားရမှာလည်း၆ဂိုးသွင်ါ်ယူထားသူပါ။အသက်၂၃နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတာကြောင့် ပေါင်သန်းတစ်ရာကျော်ရင်းနှီးရမယ့် ဟာလန်းထက်ဈေးကွက်တွက်ချေကိုက်နေမှုက …
မန်ယူအသင်းနဲ့အနာဂတ်အပေါ်ပရိတ်သတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်တဲ့ပေါပေါ့ဘာ မန်ယူအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ဥိးဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားပေါပေါ့ဘာဟာ မန်ယူအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကို ပရိတ်သတ်တွေထံသတင်းစကားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ဘောလုံးရာသီတလျှောက်လုံးအေးဂျင့်ဖြစ်သူရိုင်းအိုလာရဲ့ အဖွစကားတွေကြောင့် မန်ယူအသင်းကနေထွက်ခွါသွားတော့မယ်လို့သတင်းကြီးနေသူပါ။ ယူူရိုသန်းတစ်ရာတန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ မင်္နယူအသင်ါ်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းက၂၀၂၂နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်မန်ယူအသင်းဟာ ကစားသမားကို စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်လာမယ့်ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာနောက်ဆုံးထားပြီးရောင်းချ ရမယ့်အခြေနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ မန်ယူအသင်ါ်ဟာ ဘန်လေအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ၃-၁ရလာဒ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာပေါ့ဘာကိုSky Sportက၎င်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရာပေါ့ဘာက ကျွန်တော်ဒီမှာပျော်နေတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲ။ …
မက်ကွိင်းယားထံမှ ခေါင်းဆောင်လက်ပတ် လွဲပေးသင့်သည့်ကစားသမားများကို ရွန်းနီပြောပြီ
. မက်ကွိင်းယားထံမှ ခေါင်းဆောင်လက်ပတ် လွဲပေးသင့်သည့်ကစားသမားများကို ရွန်းနီပြောပြီ မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနီးပါးလောက်ကို ထွက်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါမှာ ယူရိုပါလိဂ်တခုသာ မျှော်လင့်စရာရှိပါတော့တယ်…. မကြာသေးမီကမှလည်း မက်ကွိင်းယားဦးဆောင်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ FA Cup ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခဲ့လိုက်ရပြီးပါပြီ… မန်ချက်စတာယူနိက်တက် …
March 27, 2021 By admin Sports News
နိုင်နေကျမန်ယူကို အမှတ်ဗလာနဲ့ပြန်လွှတ်ရန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဂီဗာတိုဆေးဗား အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဂန္ဓဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူဂီဘာတိုဆေးဗာဟာ လာမယ့်၏စနေနေ့နောက်ကျပွဲစဉ်အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အာဆသ်နယ်အသင်းနဲ့မန်ယူအသင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီအာဆင်နယ်တီဗီနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ ဆေးဗားကလက်ရှိအာဆင်နယ်အနေနဲ့ရလာ်ဒ်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းသွားဖို့အထူးလိုအပ်နေပြီးမန်ယူအသင်းကို ဆက်လက်အနိုင်ယူကာ ဥရောပဝင်ခွင့်အသင်းတွေနဲ့အမှတ်ကွာဟာချက်ကို ဆက်လက်လျှော့ချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဆေဗားက အာဆင်နယ်အသင်း အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ခြေစွမ်းကျဆင်းနေချိန်မှာတောင်နောက်ဆုံးငါးကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာသုံးကြိမ်အထိအနိုင်ယူထားတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြီးပြောဆိုသွားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးငါးကြိမ်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာအပြတ်အသတ်အသာရထားတာပါ အဲဒိအချက်ကိုအခြေခံထားပြီးအခုရရှိနေတဲ့ပုံစံကောင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားပြီးအနိုင်သုံးမှတ်လုံးကိုအပြည့်အဝရယူရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဆိုးရှားရဲ့အသင်းဟာ ကစားသမားတစ်ဦးထဲကိုသာအဓိကမှီခိုနေရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာကြောင့် …
ရာသီကုန်ရင်မန်ယူရဲ့အနေထားကလီပါပူလ်းရဲ့အောက်မှာဘဲလို့ပြောလိုက်တဲ့လီပါပူလ်းကြယ်ပွင့်ဟောင်း လီပါပူလ်းအသင်းနဲ့အဂ်လန်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး ပီတာခရောစ့် မန်ယူအသင်း ရှဖီးယူနိုက်တတ်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘောလုံးဝေဖန်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရင်းထိုသို့ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ပီတာခရော့ချ်က ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လီပါပူလ်းဟာ ရလာဒ်ဆိုးရွားနေချိန်မှာတောင် ချန်ပီယံဆုကို ဆက်လက် သိမ်းပိုက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ညက ရီယို ဖာဒီနန် နဲ့တောင် အနည်းငယ် ငြင်းခုံခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ …
မေဆင်ဂရင်းဝုဒ် ပြောပြတဲ့ သူ့ဆရာရဲ့အံ့သြစရာအရည်အချင်းတွေ မန်ယူလူငယ်တိုက်စစ်မှူးလေး မေဆင်ဂရင်းဝုဒ်က သူကြည့်ခဲ့ဖူးသမျှ တိုက်စစ်မှူးတွေထဲမှာ မိမိအသင်း ဖော် အက်ဒီဆင်ကာဗန်နီလိုမျိုး လှုပ်ရှားတတ်တဲ့သူမျိုး တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးလို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်း စာထံ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဝါရင့်ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ မန်ယူတိုက်စစ်ကို အပြောင်းအ လဲတွေပြုလုပ်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး …
ဘရာဇီးဂန္ဓဝင်ကစားသမားကြီးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခံနေရတဲ့ ယူနိုက်တတ်အသင်းကစားသမား လက်ရှိရလာဒ်ပိုင်းတွေအထူးကောင်းမွန်နေတဲ့ယူနိုက်တတ်အသင်းကိုပရိတ်သတ်တွေကအထူးချီးကျူးနေကြပြီး။အသင်းကလည်းဖာဂူဆန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့၂၀၁၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ဖို့အခြေနေကောင်းနေပါတယ်။ ထိုအထဲမှ မန်ယူကွင်းလယ်ကစားသမားးဘရူနိုဖာနန်ဒက်၊ပေါ့ဘာ၊ရက်ဖိုစ့်တို့ဟာအထူးထင်ပေါ်နေပြီးအခုနောက်ဆုံးပရီတ်သတ်တွေထံမှာရေပန်းစားလာတဲ့ကစားသမားက ဘယ်နောက်ခံကစားသမားလုရှောဖြစ်ပါတယ်။ လုရှောကို ယူနိုက်တတ်ပရီတ်သတ်တွေက ဘရာဇီးဂန္ဓဝင်ဘယ်နောက်ခံကစားသမားရော်ဘက်တိုကားလိုစ့်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းနေကြပြီး။ကာလိုစ့်လိုဘဲ တိုက်စစ်ကောခံစစ်မှာပါ စွယ်စုံရကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ချီးကျူးနေကြတာပါ။ လုခ်ရှောဟာ ဒီရာသီ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အရေးအပါဆုံး ကစားသမားတွေ ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လီဗာပူးအသင်းကို …
အရေးကြီးက အသင်းပါကစားသမားတစ်ဦးနှစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဂီယာ မန်ယူအသင်းရဲ့လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့အနေအထားဟာ အသင်းလိုက်စုစည်းမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးကစားသမားတစ်ဦးနှစ်ဦးကြောင့်မဟုတ်ကြောင်း မန်ယူအသင်းရဲ့ဝါရင့်ဂိုးသမားဒေးဗစ်ဒီဂီယာက United Review အစီစဉ်မှာပြောသွားခဲ့တာပါ ဒီဂီယာက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တွေကို လမ်းပြနိုင်အောင်ကျိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ အခုဆိုအသင်းမှာ သက်တမ်းရင့်ကစားသမားထဲမှာပါဝင်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ယူနိုက်တတ်အတွက်ပွဲများစွာကစားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို လူငယ်တွေကို အကူညီရစေဖို့ဦးဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျုးိစားလေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတွေကအသင်းအောင်မြင်ဆို့အရေးကြီးဆုံးအရာပါ။ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးတွေမှာအနိုင်ရရှိလာပါပြီ။အနိုင်ရဲ့အရသာကို တစ်သင်းလုံးခံစားတတ်လာပြီဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းအောင်မြင်ဖိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလန်းတွေရှိနေပါပြီ။ ဒီအခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်ခံလိုမဖြစ်ပါဘူး။ဒီအခွင့်အလမ်းတွေအတွက် …